नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा सुरू, ओली अनुपस्थित — Sanchar Kendra
१स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नलगाउनू
२प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
३कोरोनाले देश अस्तव्यस्त बनेका बेला नेपालीहरुको लागि आयो यस्तो खुसीको खबर, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
४आज ७३६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १४५ को मृत्यु
५लेस्टर सिटीले जित्यो एफए कप फुटबलको उपाधि, चेल्सी पराजित
६सकियो ओली-नेपालबिचको ‘वान टु’ वार्ता, के भयो सहमति ?
७कोरोनाबिरु’द्ध ल’ड्न सीसीएमसी बैठकले के गर्यो निर्णय
८यस्ताे छ इजरेल-प्यालेस्टाइनबीच तनाव भइरहनुकाे मुख्य कारण र १०० वर्ष पुरानो छ मुद्दा
९सिंहदरबारमा ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता सुरु, यी बिषयमा हुदैछ छलफल
१०कहिलेदेखि सुरु हुदैछ नयाँ शैक्षिकसत्र ? शिक्षा मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी
११बाबुराम भट्टराईको यस्तो खुलासाले ओली तनावमा
१२निषेधाज्ञाका बेला काठमाडौंमा यस्ताे काण्ड मच्चाउने ५ जना पक्राउ, को हुन् उनीहरु ?
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा सुरू, ओली अनुपस्थित
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा सुरू भएको छ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको एक्लाएक्लै भेटवार्ता सकिएलगत्तै बैठक सुरू भएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली बैठकमा उपस्थित नभएको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । ‘उहाँको खास कुरा के हो विस्तृत विवरण उहाँनिकटकै कमरेडहरूसँग सोध्नु पर्ला, तर अहिलेसम्म उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न,’ सापकोटाले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लामकार सूर्य थापाले भने बैठकको एजेण्डामै सहमति नभएकाले ओली सहभागी नभएको जनाए । ‘उहाँ प्रचण्डसँगको छलफलमा आफूले प्रस्तुत गरेको १९ पृष्टको प्रस्तावकै विषयमा छलफल हुने बताएको सुनियो, त्यसमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कुरै भएन,’ थापाले भने ।
स्थायी कमिटी जारी रहेका बेला पार्टीभित्र छलफल नै नगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि दलभित्रैबाट सरकारको चर्को भइरहेका बेला अध्यक्ष ओली बैठकमा सहभागी नभएका हुन् ।
बैठकमा जान छोडेर ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न सितलनिवास पुगेको श्रोतले बतायो । पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका विषयबाट सुरू भएको नेकपा विवाद पछिल्लो समय विभिन्न नियुक्ति र पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणपछि झनै चुलिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै खुमलटारमा मंगलबार बसेको दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको बैठकले तत्काल अध्यादेश खारेज नभए ओलीविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशअनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो । नयाँ अध्यादेशविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालिसकेका छन् ।
यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबाट संविधानमाथि बला-त्कार भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशबारे कडा प्रतिक्रिया दिँदै उपाध्यक्ष गौतमले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न पाइने तर संविधान संशोधन गर्न नपाइने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदलाईसमेत थाहा नदिई जारी गरिएको अध्यादेशमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशबारे प्रतिक्रिया दिँदै उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘अध्यादेशले ऐन संशोधन गर्न पाइन्छ, संविधान पाइन्न । अहिले जारी अध्यादेशले एकैचोटि ऐन र संविधान दुवैलाई संशोधन गरेको छ । कतिपय ऐनमा संविधानको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै राखेको हुन्छ । त्यो संशोधन गर्न ऐन होइन संविधान नै संशोधन गर्न पर्छ । जवर्जस्ती गरियो भने त्यो संविधान माथिको बला-त्कार हुन्छ । अहिले त्यही भएको छ ।’
उपाध्यक्ष गौतमले यो अध्यादेश संविधानको भावना, नेकपाको सचिवालय र स्थायी कमिटीको भदौ २६ को निर्णयविरुद्ध भएको पनि बताएका छन् । अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको नेकपा, नेपाली कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दल र संविधानका जानकारहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।
यसैबीच ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक प्रभावितकै बेला नेकपाका दुई नेता राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् । संसद बैठक आह्वानका लागि अनुरोध गर्न हस्ताक्षर सहित स्थायी समिति सदस्यहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल शीतल निवास पुगेको बुझिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले नेताहरु राष्ट्रपतिलाई भेट्नका लागि शीतल निवास आएको पुष्टि गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको छ । यही विवादका कारण स्थायी समिति बैठक समेत प्रभावित भएको र संसद बैठकको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपाको तर्फबाट रावल र भुसाल शीतल निवास पुगेका हुन् ।
यस्तै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल उक्त रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राज्यका निकायहरूको सन्तुलन विगारेको तथा संविधानमाथि नै जालसाझी गरेकाले रिट दायर गरेको अधिवक्ता अर्यालले बताएका छन् ।
सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशअनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्था गरेलगत्तै अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । अध्यादेशले ‘संविधानको आधारभूत संरचना, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता जस्ता व्यवस्थालाई निस्तेज पारेको’ अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ।
अधिवक्ता अर्यालले ‘संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो कार्य संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने गरी अवैद्य बाटोबाट गरिएको संविधानको संशोधन हो’ भन्दै अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अवान्छित स्वार्थसिद्धिका लागि संवैधानिक नैतिकतालाई तिलान्जली दिएको दावी गरेका छन्।